19 Jun, 2020 - 00:06	 2020-06-19T00:23:23+00:00 2020-06-19T00:03:20+00:00 0 Views
Ndambonyorera kuchirongwa chino asi handisati ndamuvana wandiri kuda. Ndiri murume anotsvagavo mukadzi wekuwadzana naye, tozoroorana. Ngaave nemakore ari pasi pemakumi matatu nemashanu. Nhamba yangu 0777 696 915.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 42, ndinotsvagawo mudzimai ari pamushonga seni. Andifarira ngaandibate pa0779 038 794. Ndatenda.
Makadii henyu? Ndiri mukomana ane makore 23, ndinotsvagawo musikana asati amboroorwa ane makore 21 zvichidzika. Nhare yangu 0714 576 432.
Ndiri murume ane makore 36, HIV positive uye ndinotsvakawo mudzimai ane makore 22 – 30. Ndine 2 vana, zvimwe tozotaura tasangana. Nhare yangu 0775 977 771.
Makadii? Ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ane mwana 1 kana asina, asiri pamushonga. Ngaave nemakore 18 kusvika 26 akanakawo seni. Nhamba yangu 0774 317 741.
Ndiri mukadzi ane makore 26, ndinodawo murume ane makore 30 kusvika 38, anoshanda, ndine vana vangu vatatu. Ndiri kutsvakawo murume ane status iri negative. Ari pachokwadi ngaandibate pa0716 831 861.
Ndiri murume ane makore 30, ndinotsvagawo musikana wekuroora. Ndinozvishandira, ndinodawo ane makore 18 kusvika 20. Nhare yangu 0774 408 120.
Ndinotenda Kwayedza mwenje wedu nokutipa Tishamwaridzane dapurahunanzva rechirongwa. Ndiri murume ane makore 50 uye ndiri nyanduri. Ndinotsvagawo shamwari (penpal) chero yechikadzi kana yechirume inofarira mabasa ekunyora mabhuku, zvikuru enhetembo. Nhare yangu 0788 803 325.
Ndiri mukadzi ane makore 40, ndotsvaka murume ane makore 45 – 56 ari HIV negative anonamata. Nhare yangu 0782 287 349.
Makadi zvenyu veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 27, ndinotsvagawo musikana ari pachokwadi anoenda kumasowe. Andifarira ngaandibate pa0773 199 075.
Makaita basa veKwayedza? Ndakamuwana wandaida saka vose vaifona pa0771 928 600 ngavachirega havo.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 34, ndinotsvagawo musikana kana mukadzi ane mwana 1 ane makore 20 – 26 ari pamushonga. Ngaave mupfupi, mutete zviri pakati nepakati. Afarira nhamba dzangu 0713 038 618.
Ndaneta nematsotsi? Ndiri murume ane makore 33 ndotsvaka mukadzi kana musikana ane mwana 1 kana asina. Ndinoda ane makore 20 kusvika 26 ari HIV negative asingashandi anoda imba kubva kuMarondera, Marange, Wedza neBuhera. Nhare yangu 0778 782 054.
Ndiri murume ane makore 37 nevana 2, ndotsvagawo mukadzi wekuroora ane makore 28 zvichidzika ane mwanà 1. Nhamba dzangu 0775 529 548.
Makasimba here veKwayedza? Ndakatanga kunyorera kuchirongwa kubva gore rapera asi shambadzo yangu haisi kubuda. Ndiri murume ane makore 32 uye ndinotsvaga mukadzi ane makore 20 kusvika 30 ane mwana kana asina. Ndinoda asiri pamushonga asi vakadzi vevanhu musapedze nguva, ndogara muHarare. Anenge andifarira ndobatika pa0772 171 285, ndishambadzeiwo veduwe ndiwanewo wangu. Ndatenda zvangu.
Ndiri murume ane makore 40, nevana 2 uye ndinoshanda. Ndinoda mudzimai ane makore ari pasi pe40. Ndinobatika pa0783 442 062.
Ndiri murume ane makore 30 nemwana 1, ndoda mukadzi ane mwana 1 kana asina ane makore 22 zvichidzika. Asiri pamushonga ndibate pa0712 953 626.
Ndiri murume ane makore 60. Ndinoda mukadzi ane makore 50 zvichidzika, akarongeka,anotaura English neShona ari muCatholic. Ini ndiri negative, nhare yangu 0777 263 652.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri murume ane mwana 1, ndinotsvagawo mukadzi anoda zvekuroorwa. Handina chirwere saka ndinoda mukadzi asinawo. Ndinoenda kuchechi yeJohani Masowe, ndine makore 28 ekuberekwa. Vanoda kutamba musafona uye pfambi musandifonerewo, ndoda anoda zvekuroorwa chete. Nhare dzangu 0777 746 022.
Munofara here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 24, ndodawo musikana ane makore 18 kusvika 20 asiri pamushonga uye achitarisikawo. Andida nhare yangu 0778 015 521.
Makadini? Ndiri murume anonamata ane makore 48, ndinotsvaga mukadzi ane makore 18 kusvika 40 ari muHarare. Andifarira ngaandibate pa0779 182 381.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40, handinwe doro uye handipute fodya. Ndinonamata, ndine vanakomana 2. Ndinotsvagawo mudzimai ane vana vakewo ane makore 35 – 40. Anenge andifarira anondibata hake totaura pa0775 814 111.
Makadii? Ndiri murume ane makore 33 ndotsvagawo musikakana/mudzimai ane makore 18 – 30 ave kuda zvemba. Nhamba dzangu 0716 308 573, kufona kana kuisa sms.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume anogara maMutare ane makore 35 nemwana umwe, HIV negative. Ndinotsvagawo mukadzi wekuvaka naye musha ane vana vakewo kana asina mwana, zvizhinji tozotaura. Andifarira ngaandibate pa0785 615 854.
Makasimba here? Ini ndiri murume ane makore 38, ndinotsvagawo mukadzi ane makore 26 kusvika 35 akavimbika. Ndinoda ane mwana 1 kana 2 asiri pamushonga. Ada anondibata pa0774 279 408.
Makadii henyu veTishamwaridzane? Ndiri mudzimai ane makore 25 nevana 2. Ndotsvagawo murume ane makore 30 zvichikwira, asi varume vevanhu kwete. Nhare yangu 0718 546 859.
Ndiri mudzimai ane makore 40 nevana vaviri, ndinodawo murume ane vana vaviri anoziva Mwari, vari pamushonga kwete. Nhamba dzangu idzi 0771 955 183
Ndiri murume ane makore 49, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora, anofanira kuva neutano hwakanaka. Mondibata pa+27 657 405 153.
Makadii henyu? Ndiri murume ane makore 32, ndinotsvagawo mukadzi wekuroora. Ndine vana 2 uye ndiri pamushonga, anenge ndifarira nhare dzangu sms pa0718 595 208.
Makadini? Ndanyorera ndanyorerazve ndishambadzeiwo, ndiri murume ane makore 49 nevanasikana vaviri vakura. Ndogara muHarare uye ndotsvagawo mudzimai wewanano. Ada ndibate pa0785 368 815 totaurirana zvizhinji.
Mhoroi veKwayedza. Ndiri mukadzi ane makore 40 uye ndinotsvakawo murume ari pachokwadi. Ndinogara muHarare, anoda ngaandibate pa0718 851 216.
Makadii vedare? Ndiri mukadzi ane makore 33 nevana 4. Ndinotsvagawo murume ane makore 35 – 40 akamboroora ane vake vana asi ari pamushonga kwete. Varume vevanhu kwete zvakare, andifarira ngaandibate pa0716 447 932.
Makadii veKwayedza? Ndotsvaga murume ari pachokwadi ari HIV positive ane makore 27 kusvika 30. Ndine makore 24, andifarira ngaandibate pa0787 692 579.
Makadii veKwayedza? Ndinotsvagawo mukadzi anoda zvemusha. Ndine makore 32, ndodawo ari pamushonga seni. Nhamba dzangu 0778 188 760.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 20. Ndinoda musikana ane makore 18 -19. Andifarira ngaandiibate pa0779 208 677.
Ndiri mukadzi ane makore 40, HIV positive uye ndinodawo murume wekuwadzana naye ane makore 45 – 50. Ngaave ane rudo rwechokwadi ari positive seni. Vanotamba kwete, ndinoda anogona kutsvaga mari. Nhare yangu 0715 251 521 asi varume vevanhu kwete.
Makadii? Ini ndiri murume ane makore 35 nemwana 1. Ndinotsvagawo mudzimai wekuroora ari pachokwadi anoda zveimba uye asina chirwere. Nhare yangu 0777 931 954.
Munofara here? Ini ndiri right, ndiri mukomana ane makore 26. Ndinoshanda muGoverment uye ndinogara kwaMutare. Ndinotsvagawo musikana kana mukadzi ane mwana wake anoshandawo, akangogara kwete. Ndoda munhu ari serious, anondibata 0786 191 334. Ndatenda.
Makadii zvenyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 35 nevana 2. Ndinodawo murume ane makore 40 kusvika 50. Ndinobatika pa0788 703 009.
Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana vashanu, ndiri kutsvagawo murume ane makore 43 kusvika 45 ane mhuri. Anoda ndibatei pa0775 170 114.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 28, ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 28 akanaka ari pachokwadi uye HIV negative seni. Ndinoshanda basa riri nane. Vari serious chete ndibatei 0788 097 509, ndiri muHarare.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzamai ane makore 24 nemwana 1, ndinodawo murume ane makore 28 kana 30 ari pachokwadi. Ndinobatika pa0776 556 199.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 35 nemwana mumwechete. Ndinotsvakawo murume anoda zvemba ane makore 40 kusvika 45 ari pamushonga. Ngaave nevana vaviri kana mumwechete. Andifarira ngaandibate pa0785 117 229.
Makadii henyu? Ndiri mudzidzisi ndinotsvagawo musikana akatendeka wokuroora kubva pamakore 18 kusvika 25. Ini ndine makore 30. Ndobatika pa0775 751 037.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26 ndotsvagawo musikana ane makore 21 kusvika 25 ari HlV negative.
Anoda ngaandibate pa0779 020 668.
Makadii veTishamwaridzane? Ndiri murume ane makore 43 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 35 kusvika 39. Andifarira ndibate pa0772 487 994.
Makadii? Ndodawo musikana ane makore 19 – 24 asiri pamushonga. Ndibatei pa0782 476 062.
Ndiri murume ane makore 30, HIV negative uye ndotsvagawo mukadzi ane makore ari pakati pe20 – 35. Ndinoda ari pachokwadi, vanoda ndibatei pa0783 990 107.